Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ndị njem nlegharị anya nke Africa » ATB: Enweghị ọgụ ọgụ ọzọ maka nlanarị njem ndị Africa
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • WTN
Afrịka bụ kọntinenti nwere ọnụ ọgụgụ kacha elu nke mba nwere onwe ha. Ọtụtụ mba na -adabere na mpaghara njem na njem maka inweta ego mba ofesi.
COVID-19 amanyela ndị njem njem ikpere ya.
Taa onye isi oche ndị nlegharị anya njem nlegharị anya nke Afrịka na -akọrọ ụwa ihe ndị Afrịka chọrọ maka ụbọchị njem nlegharị anya ụwa.
A Ozi ụbọchị nlegharị anya ụwa sitere n'aka Alain St.Ange, Onye isi oche ndị nlekọta njem nlegharị anya nke Afrịka na -achọ United Africa na mgba iji lanarị ihe ọrịa COVID na -eme ụlọ ọrụ njem na njem.
27th nke Septemba bụ ụbọchị njem nlegharị anya ụwa na nnukwu ohere maka onye ọ bụla dabere na njem maka ibi ndụ ha ịtụgharị uche na ụlọ ọrụ ha.
Onye isi oche ATB St.Ange kwuru, "Ka m na -agwa onye ọ bụla na nnọchite anya ndị njem nlegharị anya Afrịka ọ Happyụ njem nlegharị anya, enwere m obi umeala maka ọnọdụ ụlọ ọrụ anyị dị mkpa batara na ya."
Somefọdụ ga-eme mmemme ma ọ bụ ahịrịokwu, mana kedu ka nkebi ahịrịokwu ndị a si agbanwe ndụ nke ndị niile na-eche nnukwu nsogbu ihu n'oge ọhụrụ a maka njem.
Ụwa nke njem nlegharị anya chọrọ olu, ọ dị anyị mkpa karịa mgbe ọ bụla tupu onye ndu ga -eduzi anyị site na ijide aka anyị ka anyị na -agabiga oghere ọjọọ a. Anyị chọrọ ọhụhụ ka ụlọ ọrụ anyị wee dị mkpa yana anyị chọrọ ịdị n'otu karịa ka ọ dị na mbụ "Alain St.Ange onye bụbu onye minista Seychelles na -ahụ maka njem nlegharị anya, ụgbọ elu ụgbọ elu, ọdụ ụgbọ mmiri & mmiri.
N'ụbọchị ndị njem nlegharị anya ụwa, Maazị St. Ange na -eyi eriri na -acha anụnụ anụnụ iji gosipụta oke osimiri na -acha anụnụ anụnụ, mbara igwe na -acha anụnụ anụnụ na ọdịnihu anwụ na -acha maka ụwa nke ndị njem, yana maka Afrịka.
Ọtụtụ ndị na -etinye ego na njem nlegharị anya taa dị ka ihe egwu, ọrụ na njem na -abịa na -ejighị n'aka ogologo oge ya na nke a dị ka isi mmalite isi ahịa njem nlegharị anya na -ekewa nkewa nke mba ndị dị ize ndụ dị ka mba ndị ahụ kacha nwee ọgụ na mgba. mbụ ọgwụ mgbochi Covid-19 maka ndị ha.
Ụwa esila na ịbụ otu ụwa bịarute n'ọnọdụ ebe onye ọ bụla na -alụ ọgụ maka nlanarị nke ya na -echefu njikọ na -adịghị ike na eriri arịlịka ga -ebibi naanị ụgbọ mmiri ọ na -akwachi.
Kọmitii njem nlegharị anya nke Africa hiwere isi na alaeze Eswatini ma nwee otu ebumnuche. Nke a bụ ime ka Afrịka bụrụ ebe njem kacha amasị n'ụwa.
More ọmụma: www.africantourismboard.com
Ekwesịrị ijikọ ịdị n'otu na visibiliti dịka otu anyị na -etinye aka na ntughari njem.
Obi ụtọ na Day Tourism World!
Mmetụta akụ na ụba nke COVID-19 na Africa: